Gudiga doorashooyinka oo wali la dhisin iyo waqtiga oo dhamaanaya | KEYDMEDIA ONLINE
Gudiga doorashooyinka oo wali la dhisin iyo waqtiga oo dhamaanaya
Waxaa muuqata dib u dhac doorasho, maadaama aan jirin hal tallaabo oo loo qaadey dhanka diyaar-garowga dhismaha gudiga, lana diyaarin goobaha codbixinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegtay in Maamul Goboleedyada aysana wali si buuxda usoo gudbin xubnaha ugu matelaya gudiga isku dhafka ee doorashooyinka iyo midka khalinta khilaafaadka.
Waxuu qorshaha ahaa in 10-ka bishan la dhiso gudiyadda, kadibna la guda-gallo shaqooyinka kale ee doorashooyinka, sida diyaarinta ergadda, qalabka iyo goobaha codbixinta, waxaana muuqata inuu jiri doono dib u dhac.
Heshiiska doorashadda ee lagu saxiixay Muqdisho 17-kii September ayaa dhigaya in gudiyadda doorashooyinka lawada dhiso, iyadoo maamul kasta la siiyay afar xubnood oo matelaya, waxaana ku dhawaaqaya magacaabista Farmaajo.
Doorashadda Senator-ka ugu horeeyo waxaa lagu ballamay inay dhacdo 1-da December, oo hal bil ka harsan, waxaana jira Khilaaf cusub oo Farmaajo iyo Axmed Madoobe u dhaxeeya oo ku aadan degaanka doorashadda Garbahaarey.
0 Comments Topics: axmed madoobe doorashadda 2020 farmaajo